Fanentanana #‎UnfairAndLovely: Miady Amin’ny Fitsaratsarana Lokon-koditra Ireo Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Fanentanana #‎UnfairAndLovely: Miady Amin'ny Fitsaratsarana Lokon-koditra Ireo Vehivavy
Voadika ny 26 Marsa 2016 8:36 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, 日本語, नेपाली, বাংলা, Français, English
Pikantsary avy amin'ny kaonty Instagram @unfairandlovely_ (tsyaradrarinyarytsaratarehy)
Amin'ireo faritra maro ao Afrika sy India, matetika amin'ny vehivavy manana hoditra mazavazava no ampifandraisina ny hevitra mahazatra mikasika ny hatsarantarehy. Orinasa mampiasa vola dolara antapitrisa maro ny fikarakarana famotsiana hoditra, ary ny vokatra vokarin'izy ireo dia manohana fa ny famotsiana ny hoditra mainty dia sady azo tanterahana no tsaratsara kokoa.
Mihantsy izany ny fanentanana #‎UnfairAndLovely. Nahazo tosika ilay tenifototra any amin'ireo tambajotra sosialy isankarazany toy ny Twitter, Instagram sy Tmblr, amin'ny fanentanana ireo vehivavy mba hankalaza ny hoditra maintiny. Nanomboka tamin'ny fakàna sary tany Etazonia izany, Pax Jones no taorian'ny kamerà ary Mirusha sy Yanusha Yogarajah mirahavavy, izay avy any Sri Lanka ny ray amandreniny, no lasibika. Mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Texas avokoa izy telo vavy ireo.
Nizara ireo sary tety anaty tambajotra izy ireo miaraka amin'ny tenifototra #UnfairAndLovely mba hanoherana ny hevitra hoe midika ho tsara tarehy kokoa ny hoe “ara-drariny” (araka izay hita amin'ny anaran'ny menaka fanosotra malaza fanafotsiana hoditra Fair and Lovely).
Avy eo, niainga araka izany ny fanentanana. Nilaza tao anaty tafatafa iray i Jones, izay mainty hoditra, hoe : “Tiako hotrandrahana hoe nahoana no lasa midika zavatra be loatra erantany ny fandokoana, ary ahoana ny fiantraikan'izany eo amin'ireo foko hafa fiaviana noho ny ahy.”
Zatra an'io ny renin'ny namako ary nampalahelo ahy izany. Misy hatsaràna ao anatin'ireo tranga rehetra #unfairandlovely
Nisy ireo fihetsiketsehana hafa tamin'ny lasa nanohitra ny fandokoana. Tao India, fanangonantsonia iray nanohitra ny orinasa Emami mpamokatra kojakoja fikarakaràna endrika no niantso azy ireo mba hanàla ny dokambarotra iray manokana misy fanavakavahana, natao ho an'ilay menaka fanosotra Fair and Handsome. Fanentanana iray hafa antsoina hoe Dark is Beautifull – Manja ny Mainty (jereo ny lahatsoratry ny Global Voices) tamin'ny 2013, nanosika nanohitra ny hevitra hoe ratsy na ambany ny hoditra mainty. Ny taona manaraka, nosakanan'ny Filankevitry ny Fenitra Arahana amin'ny Doka ao India dokambarotra ho an'ny vokatra natao ho fandokoana hoditra nefa misy fanavakavahana.
Nosakan‘i Côte d'Ivoire, firenena Afrikana, ihany koa ireo menaka famotsiana hoditra, tamin'ny fitanisàna ireo vokadratsy maharitra eo amin'ny fahasalamana.
Ho an'ny #‎UnfairAndLovely, maro ireo vehivavy nizara tao amin'ny Twitter ireo sary nalain'izy tenany ihany miaraka amin'ilay tenifototra:
rehefa mifidy ireo ankizivavy mainty hoditra ny olona nefa tsy mahavita mahatsapa hoe ny ‘glo’ antsika no manome hazavana ho an'io fiarahamonina io.
#zarazara Aho na ‘bust’. Tiavo ny hoditrao, ny volonao, ireo rehetra ireo. #zarazarafatsyleo #unfairandlovely #stayunfair pic.twitter.com/UTqNbyw4mO
be comfortable in your skin, dont let the media tell u the definition of beauty c pic.twitter.com/pTOW0qMrLt
mahazoa aina ao anaty hoditrao, aza avela ho ny media no hilaza aminao ny famaritana ny hatsaràna c pic.twitter.com/pTOW0qMrLt
Tsy maninona izay lokon'ny maha-zarazara anao, tsara ianao. Kiaho ho an'ny #UNFAIRANDLOVELY! Tiako ny tenako. 👍🏾🙌🏾
#unfairandlovely: lankans, bangladeshis, ireo indiana tatsimo izay tsy niady vintana velively tamin'ny fahambonian'ireo indiana tavaratra + foto-kevitra voazanaka momba ny hatsarantarehy
Tenifototra mananihany: #UnfairAndLovely
Fihetsika maneso ny niainan'ireo vehivavy Aziatika avy any Atsimo Atsinana ny tao hoe fandokoana
Nolazaina tamiko foana fa tsara kokoa ny mazava hoditra, nefa tsia, io no hoditro ary tiako io.
Nianarako koa ny mitia ny tenako ☺
Indiana Kintan'ny YouTube i The Techy Tantrika nampakatra ity lahatsary ity ho fanohanana ilay fanentanana, mizara ny sasantsasany amin'ireo adiny manokana .
Ao anaty lahatsary, mitsikera ny hevitra Eurocentric momba ny hatsarantarehy izy : “Tsy azoko mihintsy io fotokevitra maniry ny hitovy amin'ny razan'ny hafa fihodirana io. Tsy misy dikany amiko io.”
Nolazain'i Pax Jones tamin'ny The Huffington Post fa “natao ho toerana ifanotronana” ilay fanentanana.
Atao ho an'ireo olona hafahafa mainty hoditra io, ireo manova taovampananahana, ‘genderqueer’, tsy atsy tsy aroa, mahantra, matavy, ireo olona hafa lokon-koditra.
Niaraka taminà fanentanana iray efa misy ny #UnfairAndLovely mba hamporisika ireo mponina ao Asia Atsimo hirehareha amin'ny kolontsainy sy hisarika ny saina ho amin'ny olan'ny fandokoana. Ny Takio ny Herinandro Bindi dia ny 8 ka hatramin'ny 14 Martsa.